Inja yaseLouisiana Catahoula Leopard, uboya obunokubukeka okumangalisayo | Izinja Umhlaba
Uma ufuna umngane onothando, onamandla futhi onemibala engavamile yezinwele, ngaphandle kokungabaza ufuna i- Louisiana Inja yeCatahoula Leopard. Lesi silwane esihle sizojabulisa labo abathanda ezemidlalo futhi basebenzise isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka nenja.
Ungathanda ukwazi konke ngalolu hlobo? Uma impendulo yakho ivunyelwe, lungela ukwazi ukuthi uyini umsuka, izici, nokunye okuningi ngeLouisiana Catahoula Leopard Dog.
1 Umsuka nomlando weLouisiana Catahoula Leopard Dog
3 Ukuziphatha nobuntu beLouisiana Catahoula Leopard Dog
3.1 Ingabe kunzima ukuqeqesha?
6 I-Louisiana Coahula Leopard Dog Photos
Umsuka nomlando weLouisiana Catahoula Leopard Dog
I-protagonist yethu yinja enkulu esetshenzisiwe egazini esemthethweni evela eLouisiana (EU.SA). Kukholakala ukuthi iyinhlanganisela yama-mastiffs nezinye izinja zaseYurophu ezilethwe ohambweni lwaseSpain ngekhulu le-XNUMX, kepha kungenzeka ukuthi imvelaphi yayo isanda kwenzeka. Omunye umbono uthi waqala ukukhula ngekhulu le-XNUMX, lapho izinja zaseBeaucerón (umalusi waseBeauce) zaqala ukuzihlanganisa nezimpisi ezibomvu. Ngokufanayo, igama likaCatahoula alaziwa ngokuqinisekile uma livela olimini lwendabuko lweChoctaw.
Yinja enkulu, enesisindo esingu-23 kuye ku-36kg kanti ukuphakama kuyabuna phakathi kuka-51 no-66cm. Umzimba wakhe ubumbene, unemisipha, unesifuba esijulile. Ivikelwe ngengubo yezinwele ezimfishane, eziqinile nezicwebezelayo, noma ezijiyile nezinewulu. Kungaba yingwe ebomvu (amathoni ansundu namathoni), ingwe eluhlaza okwesibhakabhaka (amathoni amnyama mpunga, amnyama amanye amhlophe) kanye nengwe emnyama (amathoni amnyama). Inhloko imise okwekhanda, nezindlebe ezilengayo ezimise okonxantathu. Amehlo abo abukeka njengengilazi yemabula, okuyilokho okwenzekayo lapho izingxenye zombala nezengilazi zikhona esweni elifanayo. Imilenze yaso mide futhi inamandla.
Inesikhathi sokuphila se- I-12 eminyakeni engu-14.
Ukuziphatha nobuntu beLouisiana Catahoula Leopard Dog
Kuyisilwane esikujabulelayo ukusebenza. Eqinisweni, uyakudinga. Kubalulekile ukuthi noma ngubani ofuna ukuhlala neCatahoula Leopard Dog akwazi lokho Kuyinja okufanele ithathwe ukuzivocavoca umzimba, kokubili ngokomzimba nangokwengqondo. Uhlakaniphe kakhulu, ngakho-ke kunconywa kakhulu ukuthenga imidlalo exhumanayo yezinja noma ukuzenzela yona ekhaya noma engadini ukuze zikhathale ngempela.
Futhi, uyazethemba futhi uncike kakhulu emndenini wakhe, kuze kube seqophelweni lokuthi akakuthandi ukuba yedwa. Uvikela abathandekayo bakhe futhi uzwana ikakhulukazi nezingane.
Ingabe kunzima ukuqeqesha?
Njengoba kuyisilwane esizimele, akuyona enye yezinhlobo ezilula kakhulu. Kubalulekile ukuthi ube nomqeqeshi oyedwa, nokuthi azi kahle ukuthi ufuna ukumfundisani. Ngokunjalo, amasu azosetshenziswa kumele kube wukuqeqeshwa okuhle, ngoba uma kungenjalo inja izolahlekelwa ukuzethemba enakho kuye.
Kungcono kakhulu ukuthi isilwane sidle Ngicabanga noma ukudla okwenziwe ekhaya okwenziwe ikakhulukazi ngenyama noma inhlanzi, ngaphandle kwethambo noma imiqolo. Futhi, awukwazi ukuntula amanzi. Futhi noma nini lapho eziphatha kahle noma ufuna ukumupha, unganqikazi ukumupha into elungele izinja.
Ngesikhathi sokuchitha kuzothambekela ekulahlekelweni yizinwele eziningi, ngakho-ke kuzodingeka ukuxubha nsuku zonke, phakathi kokukodwa noma kabili. Uma ufuna ingashiyi imikhondo eminingi kusofa noma kwenye ifenisha, kuyathakazelisa ukusebenzisa ama-combs anama-prongs aqinile futhi asondelene, ngoba lokhu kuzosusa izinwele ezengeziwe ezifile.
Ukuyigcina ihlanzekile, kufanele igezwe kanye ngenyanga. Uma kwenzeka wesaba amanzi, ungasebenzisa i-shampoo eyomile.
Kubalulekile ukuthi uphume endlini uyokwenza okuthile ngokomzimba, njengokugijima noma ukuhamba ngezinyawo. Kuyathakazelisa futhi ukuthi uzijwayeza umdlalo othile, njengobugovu noma inja yediski; Ngale ndlela, uzosebenzisana nezinye izinja nabantu, futhi ekhaya uzokwazi ukujabulela inkampani yabo ngisho nangokwengeziwe kwazise uzoba nokuthula njengoba ekwazile ukushisa wonke amandla anqwabelene.
Inja yaseLouisiana Coahula Leopard iyinja engahlupheka isisu esisontekile noma ngisho i-hip dysplasia. Yize kufanele ukhumbule ukuthi uma umnakekela kahle futhi umyisa kudokotela wezilwane ngophawu oluncane olukhombisa ukuthi kukhona okungahambi kahle, mhlawumbe uzokwazi ukusheshe alulame futhi aqhubeke nokwenza imisebenzi yakhe ejwayelekile.
Ngaphezu kwalokho, uma ungafuni ukuthi abe nemidlwane, kuyalulekwa ukuthi ucabange ngokummisa lapho uchwepheshe ekutshela.
Kuluhlobo olungajwayelekile eSpain, ngakho amanani ahluka kakhulu. Ngokwesilinganiso, intengo yomdlwane iseduze I-500 euro, kepha ungayithola ngama-euro angama-300.
I-Louisiana Coahula Leopard Dog Photos
Uma ufuna ukujabulela ezinye izithombe zale nja, nakhu onakho:
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izinja zizala » Inja yaseLouisana Catahoula Leopard, inja enhle futhi enhle kakhulu
U-Bearded Collie, umngani omkhulu wezingane